Posted on May 31, 2011 by giriyaad
Barcelona oo markeedii afraad loo boqrey horyaalnimada yurub markii ay habeen hore ku tuntey Kooxda wayn ee Manchester United daawo sawirada Iyo goolasha oo fiidiyo ah
LONDON: – Kooxda Barcelona ee dalka Spain oo hada ah kooxda ugu qatarasan caalamka, ayaa xalay qaaday Koobka Kooxaha Horyaalada Yurub ee Eufa Champions League kadib marki ciyaarti finalka ay 3-1 ku garaacday kooxda Manchester United.
Kulanki xalay oo ka dhacay garoonka Wembley ee Magaalada London ayaa waxaa ciyaar wanaagsan kusoo bandhigay laacibka aduunka Lionel Messi oo xalay si weyn uga dhex muuqday garoonka.
Messi ayaa ahaa habeen hore xidiga garoonka iyagoo ciyaartooyda United ay isku mashquuliyeen sidii ay ku joojin lahaayeen balse weey awoodi waayeen in ay celiyaan oo waxa uu ka dhaliyey gool, waxaana Barcelona ay ku jah wareerisay United kuabadaha baaska ah ee ay ku caan baxday.
United weey iska caabineysay gelinki hore ee ciyaarta weerarada Barca, laakin daqiiqadii 27-aad ayaa waxaa gool kaga naxsaday Pedro Rodriguez waxaa jawaab culus ka bixiyey arrintaasi weeraryahanka United Wayne Rooney oo u bar bareeyey daqiiqadii 34-aad, sidaasi ayeyna kusoo idlaaday qeybti hore.
Gelinkii danbe ee ciyaarta kooxda Manchester oo afarti sano ee lasoo dhaafay sadex jeer gaartay finalka koobkan waxaa ku adkaaday sidi ay u heli laheyd kuabada waxaana gool qurux badnaa ka dheliyey Messi.
United oo yaaban waxoogaa raja ahna ay ku danbeyso ayaa waxaa u dhameystiray oo dilay weeraryahanka xulka Spain David Villa kaasoo saxiixay goolkas sadexaad oo ay Barca ku qaaday koobka.
Waa marki sadexaad oo ay shanti sano ee lasoo dhaafay Barcelona ku guuleysaneyso koobkan, sidoo kale sadexda jeer ee sanadihi lasoo dhaafay waxay ka qaadeysaa koox Ingiriis ah.
Sanadki 2006 waxay ka qaaday kooxda Arsenal oo ay ku garaacday 2-1, 2009 oo ay ka duubatay Manchester oo ay ku dar dartay 2-0, iyo xalay oo ay Manchester kaga qaaday 3-1 oo ah guul weyn.
Goolki uu xalay ka dhaliyey Messi Manchester United waxa uu ahaa mid aad muhiim ugu ahaa, sababtoo ah marka hore waxa uu ahaa goolki ugu horeeyey oo uu ku dhaliyo carada dalka Ingiriiska abidkiis, sidoo kale waxa uu ahaa goolkiisii 53-aad ee uu u saxiixo Barcelona xilli ciyaareedkan, isaga oo iska bareejeeyey Ronaldo oo sanadkaan kooxdiisa Real u saxiixay 53 gool.
Waxaa intaasi kuu sii dheer in Messi oo goolka dhaliyey 54-aad in uu ku tilmaamay kii ugu muhiimsanaa ee uu dhaliyo isaga oo wadada ugu sii xaarayo in mar sadexaad loo doorto xidiga aduunka sanadka.
Xalkan Guji Ka Daawo Waa goolashii